Tag: xayeysiis video | Martech Zone
Tag: xayeysiis video ah
Khamiista, Diseembar 10, 2020 Khamiista, Diseembar 10, 2020 Elena Podshuveit
2021 ayaa ka dhigi doonta ama u jabin doonta daabacayaasha. Sannadka soo socda wuxuu laba jibaari doonaa cadaadiska saaran milkiilayaasha warbaahinta, kaliya ciyaartoyda ugu caqliga badan ayaa sii joogi doona. Xayeysiinta dhijitaalka ah sida aan ognahay waxay ku dhowdahay dhammaad. Waxaan u dhaqaaqeynaa suuq aad u kala daadsan, daabiciyayaashuna waxay u baahan yihiin inay dib uga fikiraan meelahooda nidaamka deegaan. Daabacayaashu waxay la kulmi doonaan caqabado adag oo la xiriira waxqabadka, aqoonsiga isticmaalaha, iyo ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. Si ay u
Celtra AdCreator: Bandhig Dijital ah iyo Xayeysiinta Fiidiyowga CMP
Talaado, Janaayo 2, 2018 Talaado, Janaayo 2, 2018 Douglas Karr
AdCreator waxaa lagu dhisay in kabadan 50 jiido iyo hoos udhac horumarsan iyo in kabadan 200 horey loo tijaabiyay, astaamo lagu beddeli karo abuurista xayeysiiska. Mawduucyada la dhisay waxay dardargeliyaan naqshadeynta, horumarka, waxayna hubiyaan joogteyn, ay ka mid yihiin Tilmaame-baraha Bakhaarka, Inline Video Player, Galleries, Wadaagista Bulshada iyo inbadan. Dhammaan qaybaha iyo astaamaha AdCreator waxaa lagu tijaabiyaa aaladaha, nidaamyada hawlgalka, iyo bay'adaha. AdCreator sidoo kale wuxuu leeyahay kontaroolo hubin tayo leh oo si otomaatig ah u dhisan, marka waad ogtahay waxa aad aragto inay yihiin sida saxda ah adeegsadaha.
Talaado, Febraayo 7, 2017 Talaado, Febraayo 7, 2017 Douglas Karr
Meesha barnaamijka moobiilku waa mid tartan badan oo maalmaha la abuurayo barnaamij, lagaa qaadayo xoogaa lacag ah, iyo rajada laga qabo inaad ku soo noqoto maalgashigaaga ayaa aad nooga dambeeya warshadaha badankood. Si kastaba ha noqotee, iibsashada gudaha iyo xayeysiinta app-ka ah waxay sii wadaan inay gacan ka geystaan ​​maalgelinta maalgashiga cajiibka ah ee cayaaraha iyo horumariyeyaasha barnaamijyada moobiilku ay maal-galinayaan. Vungle waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadan, oo siinaya daabacayaasha SDK adag oo loogu talagalay xayeysiinta fiidiyowga is-dhexgalka ah
Liiska Heerarka Xayeysiiska Heerka ah ee Xayeysiinta Khadka
Talaado, July 21, 2015 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Jaangooyooyinku waa lama huraan markay tahay xayeysiiska xayeysiinta ee khadka tooska ah iyo cabirka wicitaanka-wax-qabadka Jaangooyooyinku waxay awood u siinayaan daabacaadaha sida kuweenna inay jaangooyaan jaangooyooyinkeenna oo ay hubiyaan in qaabeynta ay la jaan qaadi doonto xayeysiisyada ay xayeysiiyayaashu hore u abuuri karaan oo ay ku tijaabiyeen shabakadda oo dhan. Iyada oo Google Adwords uu yahay sayidkiisa meelaynta xayeysiinta, waxqabadka xayeysiiska ee gujiska ah ee guud ahaan Google ayaa tilmaamaya warshadaha. Qiyaasta Xayeysiinta ee ugu Sareeya ee Hogaamiyaha Google - 728 pixels ballaaran oo 90 pixels dheer Half-Page -
In yar in ka badan kalabar dhammaan xayaysiisyada ku jira bogagga fiidiyowga ayaa lagu arkaa webka oo dhan, xaalad adag oo suuqleyda ku rajo weyn inay ka faa'iideystaan ​​daawashada fiidiyowga ee sii kordheysa ee qalabka. Ma ahan dhammaan war xun… xitaa xayeysiiska fiidiyowga ee qeyb ahaan la dhageystay wali saameyn ayuu yeeshay. Google waxay falanqeeyeen barnaamijyadooda DoubleClick, Google iyo Youtube si ay isugu dayaan inay aqoonsadaan waxyaabaha caawiya go'aaminta muuqaalka xayeysiinta fiidiyowga Waa maxay
Qiyaasaha muuqda: Muuqaalo iyo Warbaahin kasbatay
Wednesday, September 25, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qiyaasaha muuqda waxay siisaa wakaaladaha iyo noocyada waaweyn fursad ay ugu qaybiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin daawadayaasha ku habboon. Barnaamijkoodu wuxuu gaaraa in ka badan 380 milyan oo qof oo fiidiyoow ah bil kasta. Ilaa hadda, waxay cabbireen 3 tiriliyan oo muuqaal fiidiyoow ah, in kabadan 500 milyan oo fiidyowyo ah, iyo waliba in kabadan 10,000 oo ololeyaal xayaysiis ah. Qiyaasaha muuqda waxay u gudbinayaan xayeysiinta fiidiyow ee xulashada saxda ah qofka saxda ah waqtiga saxda ah ee daabacaha saxda ah, iyagoo ka caawinaya kuwa xayeysiinta xayeysiinta ah inay la dagaallamaan kala qaybsanaanta warbaahinta iyagoo hagaajinaya